भ्यालेन्सियाको ओशिनोग्राफिक | यात्रा समाचार
गत वर्ष भ्यालेन्सियाको कला र विज्ञान शहरको ओशिनोग्राफिकले १ fifteen वर्षमा उत्सव मनायो जब यसले युरोपको सबैभन्दा ठूलो एक्वैरियम बन्न २०० 2003 मा आफ्नो ढोका खोलेको थियो। यसको आयामहरू र डिजाइनका साथै यसको महत्त्वपूर्ण जैविक संग्रहको कारणले गर्दा हामी विश्वमा एउटा अनुपम एक्वेरियमको सामना गरिरहेका छौं, जहाँ ग्रहको मुख्य समुद्री इकोसिस्टम प्रतिनिधित्व गरिएको छ र जहाँ अन्य पशुहरू, डल्फिन, शार्क, सिलहरू, समुद्री सिंहहरू बीच। coexist वा प्रजातिहरू बेलुगास र वालरसहरू जस्तै जिज्ञासु छन्, केवल नमूनेहरू जुन स्पेनी एक्वैरियममा देख्न सकिन्छ।
1 ओशनोग्राफिकको बारेमा
2 एक्वेरियम आवास
3 ओसनोग्राफिक कसरी भ्रमण गर्ने?
4 ओसनोग्र्रिफिकमा कसरी पुग्ने?
अवन्त-गार्डे शैली वास्तुकला जटिल सिउदाड डे लेस आर्ट्स आई लेस सिन्जियन्से डे वाल्यान्सिआमा अवस्थित, एक्वेरियम महासागरहरूलाई साँचो श्रद्धांजलि हो। र यसले ठूला एक्वेरियमहरू समावेश गर्दछ जुन सब भन्दा सान्दर्भिक समुद्री इकोसिस्टम विस्तारपूर्वक पुनउत्पादित गर्दछ।
प्रत्येक ओशिनोग्राफिक भवनलाई तलका जलीय वातावरणहरूका साथ पहिचान गरिएको छ: भूमध्यसागर, वेटलैंड्स, तापीय र उष्णकटिबंधीय समुद्री, महासागर, अन्टार्कटिक, आर्कटिक, टापु र लाल समुद्र, डल्फिनारियमको अतिरिक्त।
हामीले अघि नै औंल्याएझैं ओशनोग्र्फिक डे भ्यालेन्सिया वातावरणको हेरचाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित जन्मेका थिए। यसको मुख्य उद्देश्य समुद्र र उनीहरूको ठाउँको संरक्षण बढाउनुका साथै यस सन्देशको महत्त्वलाई पनि फैलाउनु हो। एकै समयमा, यो पनि एक महत्वपूर्ण चंचल घटक छ। वास्तवमा, एक्वेरियमले सबै गतिविधिहरू र सबै उमेरका लागि अनुकूलित कार्यशालाहरूको प्रस्ताव गर्दछ ताकि बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूले ठूलो मात्रामा ओसनोग्रिफिक सिक्न सक्नेछन्।
यस वातावरणको ज्ञान प्रबर्धन गर्ने चाहनामा ओशनोग्रफिकले आगन्तुकलाई विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री इकोसिस्टमहरू जस्तै: भूमध्यसागरीय क्षेत्र, वेटलैंड्स, तापीय र उष्णकटिबंधीय समुद्री, महासागर, अन्टार्कटिक, आर्कटिक, टापु र रातो समुद्री यात्रा गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। डल्फिनारियमको अतिरिक्त।
ओसनोग्राफिक कसरी भ्रमण गर्ने?
सामान्यतया सबैले भूमध्यसागरीय बसोबास द्वारा ओसनोग्रिक को भ्रमण सुरु गर्दछ किनकि यो पार्कको प्रवेशद्वारको नजिकै छ। यद्यपि तपाईले त्यस्तो बिरोध व्यक्ति फेला पार्न सक्नुहुन्न यदि तपाईले तपाईको यात्रा विपरीत भागमा सुरू गर्नुभयो जुन डल्फिनारियम र अन्टार्कटिक क्षेत्र हो।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले पार्क नक्सामा हेर्नु पर्छ र तपाईसँग भएको समयको आधारमा ओसनोग्र्राफिकको क्षेत्रहरू सहित एक रुट तयार गर्नुहोस् जुन तपाईलाई सब भन्दा चासो लाग्छ।
ओसनोग्र्रिफिकमा कसरी पुग्ने?
बस द्वारा: बस लाइन्स १ 15 र ale the the भ्यालेन्सिया नगरपालिका यातायात कम्पनीको (EMT) ओशनोग्र्फिकको ढोकामा रोकिन्छ।
खुट्टामा: भ्यालेन्सिया एक शहर हो जुन तपाईंलाई लामो पैदल यात्राको लागि आमन्त्रित गर्दछ। प्लाजा डेल आयुन्टामेन्टोदेखि ओशियनोग्रिफिक सम्म लगभग 3.। किलोमिटरको दूरी छ र545 मिनेट हिंडाई छ।
ओश्यानोग्राफिक वर्षको हरेक दिन बिहान १०:०० देखि साँझ 10 बिहान देखि सोमबारदेखि शुक्रवार र आइतबार खुला रहन्छ, जबकि शनिबार बिहान १० देखि बिहान। बजेसम्म खुल्छ।
वयस्क टिकटको मूल्य .०.30,70० युरो छ र २२.22,90 ० युरो घटाइएको छ। Years बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु निःशुल्क छन्। एक्वैरियम बन्द हुनुभन्दा एक घण्टा पहिले लकरहरू बन्द हुन्छन्। बाहिर निस्कन र ओशनोग्रामा पुन: प्रवेश गर्नका लागि? उही टिकटको साथ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले सूचना पोइन्टमा सर्तहरू सोध्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » भ्यालेन्सिया » भ्यालेन्सियाको ओशनोग्राफिक